सुतेरै पैसा कमाउने जागिर | Nepal Ghatana
सुतेरै पैसा कमाउने जागिर
प्रकाशित : २७ श्रावण २०७६, सोमबार २१:५४
हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगार यती धेरै छन् । रोजगार पाउन हमे हमे पर्छ सजिलैसँग जागिर पाइदैन । तर अन्य देशमा सुतेरै जागिर पाईन्छ
फिनल्याण्डको राजधानी हेलसिन्कीमा रहेको एक होटेलले सुत्न कै लागि जागिर खान आह्वान गरेको छ । सुत्ने जागिर भन्ने बित्तिकै कुनै यौन धन्दाको लागि हो की ? भन्ने सोच्नुहोला । तर त्यसो होइन । यो विशुद्ध होटेलका ओछ्यानमा सुत्ने जागिर मात्र हो, अरु दायाँबायाँ केही होइन ।
होटल फिन नामको उक्त होटलले सुत्ने जागिर खान आह्वान गरेको छ । सुत्नमा पोख्त मान्छेलाई जागिर दिने बताएको उक्त होटेलमा सुत्ने जागिरका लागि मानिसले ३५ दिनसम्म मज्जाले होटलमा खाइपाइ आराम साथ सुत्न पाउनेछ ।
सुत्ने जागिर खुलाउनुको तात्पर्य खुलाउँदै होटलका म्यानेजर टिनो टिका भन्छन्, नयाँ खुलेको होटेलको प्रवर्धन र प्रचारका लागि त्यसो गरिएको हो । त्यहाँ सुत्ने र निदाउने जागिरमा छानिएका मान्छेहरुले जागिरपछि एउटा काम भने गर्नुपर्छ । उनीहरुले होटेलमा आफ्नो सुताइ तथा निद्राको विषयमा आफ्नो अनुभव लेख्नुपर्नेछ र त्यसलाई इन्टरनेट तथा अन्य माध्यमबाट शेयर गर्नुपर्नेछ ।
यो जागिर खानका लागि फिनिश, अंग्रेजी, रसियन तथा अन्य भाषाको ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।
भित्र भित्रै जसपा फुट्यो ! राष्ट्रिय